झण्डै चार दशकको ‘अराजक विकास’ को शिकार बनेको काठमाडौं उपत्यकामा बाढीको समस्या रोकिने होइन, अझ भीषण बन्ने देखिन्छ ।
पालाे इन्टरनेट कूटनीतिकाे
मानिसका हरेक क्रियाकलापमा इन्टरनेटको प्रयोग अत्यावश्यक भइसकेकाले कूटनीतिक क्षेत्रमा यसको आवश्यकता अझ बढेको छ।
किताबसँगको लडाइँ मेरो उमेर जति बढ्दै गयो मलाई के कुरामा त्यति नै बढी मात्रामा विश्वास लाग्दै गयो भने महान् पुरुष तथा महिलाको संगतबाट जुन शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ, त्यस्तो शिक्षा कुनै किताब अथवा महँगा शैक्षिक सामग्रीबाट हासिल गर्न सकिँदैन!
शिक्षा पाउन संघर्ष
शहरको बानीबेहोरा चाल पाएको थिइनँ। त्यसैले कहाँ जाने भनेर मैले पत्तो पाइनँ। मैले धेरै ठाउँमा बास मागेँ। तर, सबै ठाउँमा पैसा चाहिन्छ भने। मसँग एक पैसा थिएन। मसँग केही उपाय थिएन।
सुन्दर बग्दै छ बागमती
घरबाट निस्कने फोहोरलाई जथाभाबी फाल्ने, आफू खुशी भए पुग्यो, दोस्रो व्यक्ति र समाजबारे नसोच्ने कारण वातावरणमा असर परेको छ।
जब म अमेरिका आएँ...!
म सोच्थेँ, ग्राजुएट-स्कूलका चुनौतीहरू झेल्न म तम्तयार छु। तर, जब म पीएचडी गर्न भनी संयुक्त राज्य अमेरिका आएँ, यस्तो लाग्यो, कसैले मलाई खुशी र सम्पन्न भावमा पौडिरहेको मेरो तलाउबाट फुक्त निकालेर रहस्यमयी, विशाल समुद्रमा झ्वाम्मै खसालिदियो। त्यो समुद्रका हरेक माछा मभन्दा द्रुत गतिमा पौडी खेल्थे, लामो छलाङ मार्थे।
संकटमा नेपालका सिमसार सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसअनुसार, संरक्षणका लागि ठोस कदम नचाल्दा नेपालका सिमसार क्षेत्रहरु संकटमा परेका छन् ।